पिसाब गर्दा दु’ख्नु र छालामा भएको नि’शाना बढ्नु पनि क्या’न्सरको ल’क्षण, थाहा पाउनुस् कतिबेला परीक्षण गर्ने ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पिसाब गर्दा दु’ख्नु र छालामा भएको नि’शाना बढ्नु पनि क्या’न्सरको ल’क्षण, थाहा पाउनुस् कतिबेला परीक्षण गर्ने ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पिसाब गर्दा दु’ख्नु र छालामा भएको नि’शाना बढ्नु पनि क्या’न्सरको ल’क्षण, थाहा पाउनुस् कतिबेला परीक्षण गर्ने ?
क्या’न्सरका थुप्रै लक्षण यस्ता हुन्छन् जुन अन्य रो’गसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन् । जस्तै पिसाब गर्दा पी’डा महसुस हुनु । यस्ता थुप्रै लक्षण छन् जसले क्या’न्सरतर्फ इंगित गर्छ । क्या’न्सरका केही विशेष लक्षण देखिँदा पुरुषले केही परीक्षण गराउनु पर्छ । यसले क्या’नसरमात्रै होइन अन्य रोगको ख’तरा पनि कम गर्न सकिन्छ । कस्ता लक्षणले के क्या’न्सरतर्फ ईशारा गर्छ, त्यसबारे जानकारी लिऔं ।
– साधारणतया प्रोस्टेट क्या’न्सरको ख’तरा ४५ वर्षको उमेरपछि हुन्छ । तर कम उमेरमा पनि खराब जीवनशैली वा वंशानुगतका कारण यस्तो रो’ग देखिन्छ । पिसाब गर्दा स’मस्या हुनु वा पी’डा हुनु, यो क्या’न्सरतर्फ इशारा गर्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिले पनि परिवारमा यस्ता सम’स्या छ भने नियमित रुपमा ६ महिनाको अन्तराल वा वर्षमा एक पटक डिजिटल रेक्टम एग्जाम र प्रोस्टेट स्पेसिमेन एन्टीजन परीक्षण गराउनुपर्छ ।
शुक्र’किटको निर्माण गर्ने अ’ण्ड’कोषसँग जोडिएको यो क्या’न्सर दुर्लभ हुन्छ । यसको धेरैजसो मामिला २० देखि ५४ वर्षको उमेरमा हुन्छ ।
आवश्यक परीक्षणः व्यक्तिको अ’ण्ड’कोषमा भारीपन, सुन्निने र यसको आकारमा परिवर्तन महसुस भइरहेको छ भने डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ । साथै नियमित रुपमा टेस्टीकुलर परीक्षण गराउनुपर्छ ।
– यो ठूलो आन्द्रामा हुने मुख्य क्या’न्सर हो । महिलाको तुलनमा पुरुषमा यो रोगको खतरा दोब्बर हुन्छ । आन्द्रा खुम्चिनु र यसको आन्तरिक सतह असामान्य रुपमा बढ्नु यसको सुरुवाती लक्षण हो ।
सिटी स्क्यानका साथै कोलोनोस्कोपी, एक्स रे वा सिग्मोइडोस्कोपीले पनि यो क्या’न्सरको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
– मेलोनोमा छालाको क्या’न्सरको सबैभन्दा साधारण प्रकार हो । यसमा छालाको रङमा असामान्य परिवर्तन वा कुनै कारण बिना दाद वा कुनै निशान देखिनु यो रोगको इशारा गर्छ । लामो समयसम्म घामको सम्पर्कमा बस्दा पनि यसको आ’शं’का बढ्ने गर्छ ।
छालामा देखिएका कुनै दागका आकार, रङमा लामो समयसम्म परिवर्तन महसुस भए छालारोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 1, 2021 April 1, 2021 113 Viewed